Ukubuyekezwa kwe-Spiritum - Ukufundwa kwengqondo okuku-inthanethi
Ukufundwa kwengqondo ku-intanethi > Ukubuyekezwa kwe-Spiritum
Lapho umoya ushukumisela ukuba ufune isiqondiso ekutholeni indlela yakho yeqiniso, izimpendulo ezingenasisekelo zengqondo I-Spiritum ukulungele ukukuqondisa. Le nethiwekhi yenethiwekhi ye-psychic isuke isithathe ngokuqinile indawo yayo njengensiza yokukusiza ukuxhuma (ngolimi lwakho lwabantu) ukuze kube nemimoya ehlonishwayo emhlabeni wonke.
Ungase uthi I-SpiritumIsiphetho sesimiselwe ngaphambili. Inkampani yabazali bayo, i-Eso.tv, ikhiqiza izinhlelo ze-psychic ze-TV ezisakazwa emazweni ayi-14 futhi ezibukwe ngokulangazela ngamakhulu ezinkulungwane zababukeli. Ngenxa yalokho, ungalindela izindinganiso eziphakeme kakhulu zobuqiniso, ukunemba nokuqonda ekufundweni kwakho.
Udinga ubufakazi? Hlola ububanzi babo bezingqondo. I-Spiritum izikhwama zokugqoka kanye nokuqoqa ngokucophelela izinkinga ezibucayi ezivela ezweni ngalinye lendawo ukuze zinikeze isiqondiso esiphezulu neseluleko, okwenziwe ngabomuntu ngamunye.
Ngamanye ama-psychic uye wazikhandla ngobuciko imikhuba yasendulo efana nokufundwa kwekhadi le-tarot, ukubhula ngezinombolo nokubhula ngezinkanyezi kanye / noma unelungelo lamakhono namakhono. Futhi yilowo nalowo uhlolwe njalo ukuze asize ukuqinisekisa ukuthi basebenzisa izipho ezingenasidingo ngezifiso ngokuziphendulela ukuqondisa abafunayo endleleni yabo yokuphila. Ngokubili, zimelela amakhono amaningi, kufaka phakathi isiqondiso esingokomoya, ukufundwa kwamandla, ukuhlaziywa kwephupho, ukufundwa kwe-rune, ukusakaza, nokunye okuningi.
Futhi kulula ukuxhuma! Isayithi laklanyelwe ukunxusa kepha hhayi ukukucindezela ngezinkinobho ezisheshayo ezilula ezenza ukwazi ukukhetha ingqondo, ukukhuluma mahhala engxoxweni yevidiyo, noma ukuthenga izikweletu zokufunda okuyimfihlo. Uma ukhetha inkulumo ekhululekile yokukhuluma, ungaqhubeka ngokuchofoza ngokushesha ebhokisini levidiyo, elibonisa ngokuqhubekayo ividiyo ye-psychic ekhethiwe. Noma ungachofoza kunoma yimaphi amaphrofayli abonisa ibha evelele ethi "I-Chat Chat Manje".
Khona-ke ungakwazi ukubandakanya ingqondo oyikhethile ngokubuza noma yikuphi umbuzo ovuthayo engqondweni yakho. Uke wahlangana nomlingani wokuphila ohlosiwe ukuba naye noma kufanele yini umnike umthwalo? Ingabe impumelelo yomsebenzi nokuchuma kwakho kulindeleke ngqo ekhoneni? Ingabe kukhona othandekayo kuwe endaweni engcono? Ingabe iphupho elicacile obenalo ebusuku eledlule lisho isimanga osilinde isikhathi eside?
I-Spiritum izimo zengqondo zenze iseluleko kanye nesiqondiso kuwe kanye nokuphila okucabangayo. Ngokuhlola amaphrofayili we-psychics, ungaveza ngokucacile ukuthi yiziphi ezifanelekile futhi wenze isinqumo esinolwazi. Kunokuningi okuzokusiza; Amaphrofayli awamathuluzi aphelele futhi abonisayo, ubuchwepheshe, amakhono, isitayela sokufunda, izilimi ezikhulunywe, amanani, ubufakazi, ngisho ne-bio emfushane. Ngaphezu njengebhonasi eyengeziwe, ungathola ukuthi bangaki abanye abalungile abasizwa yi-psychic ocabangayo futhi ubuke izilinganiso zabo zamanje.
Njengesayithi elisha, I-Spiritum kusekhona kwimodi yayo yokukhula. Isibonelo, azikho izikrini zokuhlunga futhi okuncane okungaphandle lapha; ukugxila kubonakala ngokucacile kuma-psychics. Kudinga ukuhamba kancane ukuze kufinyelele ingxenye ye-FAQ, efihliwe ngaphansi kokuthi "Usizo" ngezansi kwekhasi. Sikholelwa ngokuqinile ukuthi ezinye izici nokuhamba kalula kuzokwenezelwa njengoba umphakathi uqhubeka ukwanda.
Noma kunjalo, kunezinto eziningi kakhulu ukuthi I-Spiritum wenza kahle. Uma umusha kusayithi, ungaxoxa nomlingo obhalwe ukuthi “utholakalela i-Free Chat” kuze kube yimizuzu eyi-10 mahhala. Leyo ngxoxo yamahhala ihloselwe ukuqinisa idolo futhi; akukho mali edingekayo ukuze kusizakale izinsizakalo zikaMoya.
I-Spiritum uye wanikezela ngezinhlinzeko zokusungula ... futhi ubani ongabeka icala? Ngokumane nje akutholaki kangcono kunokuthi "mahhala." Uma usuyanelisekile ukuthi umqondo wakho uyaziqonda izidingo zakho nesimo sakho, ungathenga izikweletu, Ungabe uhlanganyela ezingxoxweni ezizimele zevidiyo ezimbili noma uxhume nge-imeyili noma ngefoni …Zikhethele. I-psychic ngayinye ibeka amanani akhe siqu, iqala ngo-99 ¢ ngomzuzu futhi isekelwe ngobuciko kumakhono ochwepheshe. Kungcono kuwe ukucacisa ubude bokufunda kwakho; ngaleyo ndlela uzokwazi ukuthi uphendule yini lokho okufundayo kuyodla ngaphandle kwemangalisa.
Njengoba ungalindela enkampanini ephethwe ngu-Eos.tv, I-Spiritum uzibophezele ukuqedela ukwaneliseka. Uma ungathokozi ngokugcwele nokufunda kwakho, uzothola enye ukufunda mahhala kunoma iyiphi ingqondo emphakathini wayo.
Okubalulekile: I-Spiritum limelela inani elihle. Mhlawumbe akekho enye inethiwekhi yezingqondo ezisebenzayo namuhla enikezela ukusekelwa okuningi kwezilimi eziningi ezivela ezingqondweni ezinhle kakhulu ezingqondweni zamazwe amaningi. Uma ungeza engxoxweni engenayo engenayo engenayo ingozi, akukho lutho lokulahlekelwa ekuhloliseni lezi psychics ezinesipho. Futhi mhlawumbe, ikusasa elisha elikhanyayo ukuze lizuze.